Antoko politika 15 miara-manasonia fifanarahana momba ny zon’ny queer · Global Voices teny Malagasy
Tsy nanasonia ny fanambaràna ny antoko mitondra
Voadika ny 02 Jona 2021 4:48 GMT
Taratasy voasonia. Sary navoaka ao amin'ny pejy Facebook Tbilisi Pride.
Ny tantara etoana dia nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny OC Media. Endrika maivamaivana kokoa no avoaka etoana araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Ny fifanarahana izay natsangan'ny Tbilisi Pride dia nosoniavin'ny antoko politika lehibe avy amin'ny fanoherana ahitana ny United National Movement (UNM), European Georgia, Lelo, Antoko Repoblikana, Strategy Aghmashnabeli, ary ireo antoko Girchi roa tonta. Tsy nanasonia ny dosie kosa i Aleko Elisashvili ao amin'ny antokon'olompirenena, ny Antokon'ny Mpiasa, ary ireo olom-boafidin'ny Antoko Sosialista Eoropeana.
Anaovan'ireo mpanohitra fihetsiketsehana mpandala ny mahazatra antsojay matetika manko ireo mpikatroka mpandala ny zon'ny queer te-haneho ny zony tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Tamin'ny taona 2019, tsy tonga tany amin'izay nokasaina hahatongavany ny diabem-pireharehana voalohany nataon'ny queer tao Zeorzia rehefa nanambara ny minisiteran'ny atitany fa tsy hiaro azy ireo ny polisy.